အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရင်ထဲက လူစွမ်းကောင်း
23 Responses to “ရင်ထဲက လူစွမ်းကောင်း”
Super Hero တွေရှိပါတယ်
၁။ ကောင်းမှုဘက်က ရပ်တည်ပြီး မကောင်းမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား တိုက်ထုတ်နေသူ အန်တီစု
၂။ ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာအတွက် မဟုတ်ဘဲ စေတနာမေတ္တာသက်သက်ဖြင့် လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသူ ဦးကျော်သူ
အားလုံးဟာ ရင်ထဲကအမြဲလေးစားနေရတဲ့သူရဲကောင်းတွေပါပဲနော် ...
သူရဲကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ သက်ရှည်ကျမ်းမာလို့ ဘေးကင်းဖို့ ပဲဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
'ကိုယ်နှစ်သက်လို့ ကိုယ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အနစ်နာခံတယ်လို့ ပြောရင်တောင် မလုံမလဲခံစားရပါတယ်၊ အဲဒီအတွက်လဲ ဘယ်တော့မှ ဘာမှ ပြန်မတောင်းဆိုပါဘူး” လို့ စကားကိုပြောခဲ့တဲ့သူမနဲ့ “ငါတို့လိုရချင်ရင် ငါတို့နေရာမျိူးရောက်အောင်လုပ်” လို့ ပြောတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ နံ့သာဆီနဲ့ ဟိုဟာလို ကွာတယ်နော် ..............
“တကယ့် လူစွမ်းကောင်းတွေဟာ သူတို့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ ဘယ်တော့မှ အခကြေးငွေ မယူကြပါဘူးတဲ့…” မမချောရေ ညီမလေး ဖတ်သွားပါတယ် ...ကိုယ်တိုင် သူရဲကောင်းဖြစ်အောကြိုးစား ပါအုံးမည်...
အဆိုတော်ကြီး မာမာအေးရဲ့တပည့် မတစ်ယောက်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ
သူ့ ဆရာမ နာမည် ထုပ်မပြောဝံ့ ပဲ သွယ်ဝိုက်ပြောခဲ့ ရရှာသလို ဖြစ်နေပြီနော်။
နီးရာဒါးများကြောက်ရတဲ့ ဘဝ ..၊
ကျွန်တော်ကတော့ထားပါ..၊ ဝေးရာ ရောက်နေလို့ .
ကျွန်တော့် ရင်ထဲက သူရဲကောင်း ကတော့ကျွန်တော် “ မဗေဒါ ” လေးနဲ့ 
တင်စား ရေးမိတဲ့“ အမေစု ” ပဲ လို့ကြယ်ကြယ်လောင်လောင်
အော် ခဲ့ တယ်ဗျိုး..။
သူမဟာ မချီးကျူးပဲနဲ့ကို မနေနိုင်ဖြစ်ရတဲ့ သူရဲကောင်းထဲက တယောက်ပါပဲ...
ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ဖခင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ မိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲဗျာ။
ဒီနေရာမှာ တခုတော့ပြောပါရစေ မချောရေ။
ကိုယ့်ရင်ထဲက သူရဲကောင်းဟာ ဘယ်သူပါလို့ တည့်တည့်မပြောရဲကြသေးဘူး ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျော်လင့်ချက် အပြည့်အဝနဲ့ ရယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုတော့
ဘာပဲပြောပြော ပညာရှိနည်းဖြင့် ရေးထားတဲ့ မချောရေ ဒီPost လေးဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်
မရေ....ညီမ မှာလဲ ရှိတယ်။ ညီမ ဘဝရဲ့ လမ်းပြ ကြယ်တွေပေါ့။
သူတို့ တွေလို ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ခုထိလည်း ကြိုးစားနေတယ်။ :)
အရမ်းကို အသိပညာ ပါတဲ့ Post ကောင်းလေးပါ ..မ...:)
အများအတွက်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ကတည်းက ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာ မတွေးတော့လို့ပဲ
ဒါကြောင့်လည်း လူထုချစ်တဲ့သူရဲကောင်း ဖြစ်တာပေါ့။
အခုလို အများအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ ပိုစ့်တွေ များများရှိသင့်တယ်...
ကျွန်တော့ဘ၀ရဲ့ သူရဲကောင်းက(သူများတွေလောက် အမြင်မကျယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ချော များလေ စာဖတ်အား ကောင်းလာဘီ သိလား ချောရေးထားတာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းသိတယ်နော်
“ ဘာရေးထားတာလဲ နားမလည်ဘူး ” လို့မမေးဘူးနော် ဟဲဟဲ
များတို့ ရင်ထဲက ဟီးရိုးက တယောက်တည်းလေ ချောရဲ့
ဟုတ်ပအစ်မချောရယ်.....အဲဒါမှတကယ့် စွမ်းအားရှင်တွေပါပဲ။ တုတ်ဆွဲဓါးဆွဲက ဘယ်လိုများစွမ်းအားရှင်ဖြစ်နေကြပါလိမ့် :) စိတ်မကောင်းစရာပဲ :(
ဗမာ လူထုကြီးကြီးတရပ်လုံးရဲ့ ဟီးရိုးနဲ့ အတူတူပဲ....
အားကျစရာကောင်းတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ချောရယ် ... သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတိုင်း လိုက်နာနိူင်အောင် ကြိုးစားရင်း သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုချင်တယ် ..
ခုချိန်မှာ ဟီးရိုးပိုစ့်က ပိုပြီးအသက်ဝင်နေပါတယ် မမရေ။
သူတို့လေးစားအားကျရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ကိုယ်စီရှိတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် လူအားလုံးရဲ့ စိတ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာ လေးစားအားကျရတဲ့ သူရဲကောင်းက တညီတညွတ်ထဲနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ ဒါမျိုးက ညှိယူလို့မရဘူး။ ရင်ထဲက တကယ်လာကြတာ။
သူရဲကောင်း..ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတာလေး သဘောကျတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူရဲကောင်း တံဆိပ်ကပ်နေသူတွေအတွက်ကိုတော့ တကယ့်ကို ပြုံးမိပါတယ်။
တကယ့် သူရဲကောင်းတွေက ပေးဆပ်တယ် ဆိုတာမျိုး မပြောဘူး....သူယုံကြည်ရာ ရဲရဲလျှောက်တယ်။ ဖြစ်လာသမျှ ရဲရဲရင်ဆိုင်တယ်...။ အရေးကြီးဆုံးတခုက သူများကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မနှိမ့်ချတတ်ဘူး။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပါပဲ ချောရေ....တို့တွေ ရင်ထဲမှာ အားလုံး တူတူ သူ ရှိနေပါရဲ့ နော်....
သူရဲကောင်း ကို ကြိုဆိုကြပါစို့ အားလုံး သိကြတဲ့ ရင်ထဲက သူရဲကောင်း
စာရေးသူရဲ့ ရင်ထဲက သူရဲကောင်းဆိုတာ ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူရယ်လို့ သိသာပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲကသူရဲကောင်းနဲ့ ထပ်တူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.
သူရဲကောင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာလည်း အငြင်းပွားဖွယ် မရှိအောင် လက်ခံပါတယ်။ လေးစားအားကျမိပါတယ်ဗျာ။
သူရဲကောင်းဆိုတာကို ခံစားတင်ပြထားတဲ့ မကို လေးစားလျှက်
ဘ၀မှာ အလေးစားဆုံး၊ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အားကျစရာအကောင်းဆုံး လူစွမ်းကောင်းဟာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်သီးခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာ မျှော်ကိုးမှုမရှိခြင်း စတဲ့ အရည်အချင်းများစွာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကို မငဲ့ကွက်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်ပြီး ပေးဆပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ ရင်ထဲက လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် ..............
ကိုယ်ကျိုးမဖက်လုပ် ဆောင်တယ်ဆိုတာ ဆိုတာဟာ အရမ်းကိုကောင်းမွန် မြင့်မြတ်လွန်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ..
ပြင်ပကမ္ဘာမှာ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့ အသက်တွေများ တိုကြလွန်းလို့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ Hero ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကြတာလားလို့..
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့ သေချာတဲ့ အရာတစ်ခုက အသက်တိုသည်ဖြစ်စေ.. မတိုသည်ဖြစ်စေ.. မိမိရဲ့ ကောင်းမှုဆိုးမှုတွေဟာ.. မိမိရဲ့ နောင်လာမဲ့ဘ၀ဆိုတာထက်.. မိမိရဲ့ နောင်လာနောင်သားတွေ ခံစားရတယ်ဆိုတာပါပဲ..